श्वेता तिवारीले तेस्रो विवाह गर्दैछिन् ? खुसी हुँदै कसको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् – Kavrepati
Home / मनोरंजन / श्वेता तिवारीले तेस्रो विवाह गर्दैछिन् ? खुसी हुँदै कसको तस्बिर सार्वजनिक गरिन्
admin July 6, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 128 Views
श्वेता तिवारीले ‘खतरों खिलाडी ११’ मा भाग लिएपछि केप टाउन गए पछि दोस्रो पति अभिनव कोहलीले धेरै विवाद गरे। अभिनवले दावी गरेका थिए कि श्वेताले आफ्नो छोरा रेयन्शलाई होटेलमा छोडेर शोमा भाग लिन गएकी थिइनन् र उनलाई छोरालाई भेट्नसमेत दिएका थिएनन्।
Previous काठमाडौमा यति ठूलो घटना भएको २४ घण्टामै प्रहरीको सफल अनुसन्धान
Next काठमाडौमा यति ठूलो घटना भएको २४ घण्टामै प्रहरीको सफल अनुसन्धान